Suudaan Oo Joojisay Dal-ku-galkii Ay Siin Jirtay Soomaalida | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home ARRIMAHA SIYAASADDA Suudaan Oo Joojisay Dal-ku-galkii Ay Siin Jirtay Soomaalida
Suudaan Oo Joojisay Dal-ku-galkii Ay Siin Jirtay Soomaalida
Cabduqaadir Maxamuud Guullane
Dowladda Suudaan ayaa amar ay soo saartay 20-kii bishii Jannaayo ee sanadkan ku joojisay dal-ku-galkii ay siin jirtay dadka Soomaalida ah oo ay ku jiraan ardayda waxbarashada u aadi jirtay dalkaas.
U qeybsanaha waxbarashada iyo dhaqanka ee safaaradda Soomaalida ee dalka Suudaan, Cabduqaadir Maxamuud Guullane ayaa Xaqiiqa Times u sheegay in ay jirto warqadda amarka ah, balse aan iyaga si rasmi ah loo soo gaarsiin.
Warqadda la sheegay inay kasoo baxday Waaxda Arrimaha Dibadda ee dowladda Suudaan oo aan aragnay nuqul ka mid ah, waxaa ku qoran in dadka Soomaalida ah aan la siin doonin dal-ku-gal sabab kasta oo ay u socdaan, taasoo loo sababeeyay in Soomaalida aysan u hoggaansamin sameysashada deggenaashaha dalkaas iyo koror ku yimid dadka Soomaalida ah ee u tahriibaya Liibiya, si ay u sii gaaraan qaaradda Yurub.
Cabduqaadir Guullane ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay go’aanka kasoo baxay dowladda Suudaan, isagoo xusay inay jiraan arday garoonka diyaaradaha ee Khartoum laga celiyay amarka kaddib.
Warqadda waxaa ku saxiixan madaxa Waaxda Arrimaha Ajaaniibta Suudaan, Gaashaanle Sare Yaasiin Maxamed Xasan, waxaana nuqul ka mid ah la siiyay Madaxa Waaxda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Suudaan iyo Madaxa Waaxda Socdaalka ee garoonka diyaaradaha Khartoum.
Guullane wuxuu xusay in dowladda Suudaan ay xiriir la soo sameysay kaddib markii ay ka cawdeen arrintan.
Wuxuu xaqiijiyay in Talaadadii (10-kii Febraayo) ay wadahadal la yeesheen Waaxda Arrimaha Ajaaniibta Suudaan, oo ay ka wadahadleen sidii wax looga qaban lahaa arrintan, isagoo xusay inay sidoo kale u qorsheysan tahay inay maalamaha soo socda la kulmaan Agaasimaha guud ee Waaxda Socdaalka iyo Jinsiyadaha dalka Suudaan.
Saameynta ugu badan waxay ku yeelan doontaa ardayda Soomaalida ah ee waxbarashada u aadi jirtay dalka Suudaan, sanad walba boqollaal arday ayaa deeq waxbarasho ka hesha dalkaas, iyadoo loo marsiiyo Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya, hay’adaha islaamiga ah iyo kuwa waxbarashada iyo Safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan.
Magaalooyinka kala duwan ee dalka Suudaan waxaa wax ka barta ku dhawaad 7 kun oo arday, kuwaasoo badankood waxbarashadooda ay tahay lacag la’aan, waana dalka ay wax ka bartaan ardayda ugu badan ee Soomaalida ah.
Marka laga soo tago ardayda waxaa jira Soomaali kale oo u tahriibaya dalka Liibiya, si ay u gaaraan qaaradda Yurub, waxay ku galaan dalka Suudaan siyaabo kala duwan, qaarkood waxay qaataan dal-ku-gal ardaynimo, halka kuwa kale ay ku tagaan qaab sharci-darro ah, iyagoo inta badan ka gala dalalka Itoobiya iyo Koonfur-Suudaan.
Xuseen Nuur Xaaji oo wax kusoo bartay dalka Suudaan ayaa u sheegay Xaqiiqa Times in amarka Suudaan ay ku joojisay dal-ku-galka haddii uu dhab yahay ay sabab u tahay Soomaalida u tahriibeysa dalka Liibiya, oo sanadihii dambe si aad ah ugu qulqulayay dalkaas.
Wuxuu tilmaamay in marar badan ay dhacdo in lasoo qabto dad Soomaali ah oo u tahriibaya Liibiya, maalmo xabsi ah kaddib, xorriyaddooda dib baa loo siiyaa, iyadoo sababtu ay tahay in dowladda Suudaan ay mar kasta muwaadiniinta Soomaalida ah ula macaamisho si ka wanaagsan muwaadiniinta dalalka kale.
Xuseen ayaa xusay in dowladda Suudaan ay culeys badan kala kulantay dadka Soomaalida ah oo tan iyo burburkii dowladdii dhexe ay u oggolaatay inay si xor ah oo fudud u galaan dalkeeda, xilli dalal badan oo dariska iyo caalamka ah aysan aqoonsaneyn baasaboorka Soomaaliya.
Dowladaha Suudaan iyo Soomaaliya ayaa leh xiriir wanaagsan oo u badan dhinaca waxbarashada iyo tababarka ciidamada, tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya arday badan ayaa deeq waxbarasho ka heshay Suudaan, qaarkood waxay ka mid noqdeen dowladihii KMG ahaa ee dalka, halka qaar kale ay ku jiraan xukuumadda cusub. Sidoo kale waxa ka mid noqdeen mas’uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir iyo kuwa degmooyinka Muqdisho.
Previous articleWareysi: Murashax Maxamed Cilmi Afrax
Next articleWargeyska Xaqiiqa Times Caddadka 12-aad